Online မှာ Video လေးတွေရှယ်ပြီး ငွေရှာရအောင် ~ IT Guide Myanmar
လာပြန်ပြီဗျာ ဒါကတော့ ၀ယ်စရာမလိုပဲ ဖရီးလုပ်လို့ ရတာပါ ငွေရှာတာပဲပေါ့ ဒီဆိုဒ်လေးက ရှင်းတယ်
ဘာမှပေးမ၀ယ်ဘူး Video file လေးတွေ တင်ပေးနေတာနဲ့ ငွေရတယ် တင်တဲ့နေရာမှာလဲ
Upload Videos | Web | FTP | File Hosting | Upload from Youtube links
ဆိုပြီး ပေးထားပါတယ် ဘယ်နေရာတင်ချင်လဲ ကိုယ်ပိုင်လေးတွေ တင်မလား ဒါမဟုတ် youtube က Video file တွေ ကို အားလုံးကို တင်မလား ရတယ် ဘယ်အပင်ပန်းခံမလဲနော် youtube ကလင့်တွေ ယူပြီး တင်လိုက်တာ သက်သာတာပေါ့ ဘာမှ စိတ်ရှုပ်စရာမရှိဘူးတွေ့ကရာလင့်ယူတင်လဲ ပိုက်ဆံရမှာပဲကို သူမှ ကန့်သန့်မထားတာ အဲအဲ မေ့လို့ No adult material! Otherwise your account will be banned. လို့တော့ဆိုထားတယ်ဗျ ညစ်ညမ်းတာတွေ တင်မယ်ဆိုရင် အကောက်ဘမ်းပစ်မယ်လို့ ပြောထားတာတော့ ရှိတယ် ပိုက်ဆံလိုချင်ရင်တော့ သွားမတင်နဲ့ပေါ့ဗျာ လင့်ကို တစ်ခါတင် ငါးခုထိတင်ခွင့်ပေးထားတယ် နီးရာလင့်ဆွဲတင်လိုက်ပေါ့ Video file တွေပဲနော် Vied၀ ဇာတ်ကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး သီချင်းလဲ ရတယ် ရုပ်မြင်ရင်ရပြီ စလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီနေရာမှာ အကောက်ဖောက်လိုက်ပါ အကောက်ရပြီဆိုရင် upload ကိုနှိပ်ပြီး အားအားရှိတင်နေပေတော့ တင်နိုင်သလောက် ပိုက်ဆံရမယ် ကိုယ့် အကောက်ကနေလင့် သူငယ်ချင်းများများ ခေါ်နိုင်ရင် ၁၀% ဘောနပ်ရမယ် ဆိုဒ်ရှိလို့ ဆိုဒ်နဲ့ Verify လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ၅% ဘောနပ်ထပ်ရမယ် နှစ်ခု လုံးဆိုရင်တော့ ၁၅% ဘောနပ် ရမယ်ပေါ့ဗျာ လူခေါ်တာ ကတော့ အင်ဗိုက်လုပ်လို့ရပါတယ် ဘယ်လောက်များများတင်နိုင်သလဲ ဆို တာအပေါ်မူတည်ပြီးငွေရနှုန်းကွာသွားပါမယ် ပြည်တွင်းက ညီအကိုများအားလုံး ငွေတောင်းခံဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုပြီး စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ ရသလောက်လုပ်ပါ အလကားပေးနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ အချိန်တော့နဲနဲပေးရမယ်ပေါ့ အခြားဟာလုပ်ရင်းတင်ထားလိုက် လဲရတာပဲကို သူဟာသူတင်နေမှာပေါ့ တင်တဲ့နေရာမှာလဲ နဲနဲ လူလည်ကျပါ ယူကျူကဖိုင်တွေ ကို သေးသေးလေးတွေ 3MB 2MB စသဖြင့် ငယ်နိုင်သမျှ ငယ်တာတွေ ရွေးရှာပါ ကိုယ်ကြိုက်ဖို့မလိုဘူးဖိုင်တစ်ခု အပ်လုတ် လုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတာ ပထမအနေနဲ့ ဖိုင်သုံးဖိုင်တင်ပြီးတာနဲ့ ငွေ စတင်ရေတွက်တော့မှာပါ အဲသုံးဖိုင်ကတော့ ဖရီးပေါ့ဗျာ ဖရီးဆိုပေမယ့် အစမှာပါ နောက် တင်တာများလာရင် သူလဲပေါင်းထည့်တာပါပဲ ၅ဖိုင်လောက်ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ပြီးပါပြီ ဖရီးမဖြစ်တော့ပါဘူး ဒေါ်လာ ၃၀ ကနေစပေးပါတယ် တစ်လစာ လောက် တင်ရင် ၃၀ အနိမ့်ဆုံး ၃၀ ရလဲ မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ နော် အရင်တင်ပေးတဲ့ ဆိုဒ်က ၀ယ်ရတယ်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းက ညီအကိုများအခက်အခဲ ရှိပါတယ် ဒါကြောင့် ဆက်မပြောတော့တာပါ ပြည်ပကလူတွေကတော့ လုပ်လို့ရတာပေါ့လေ အက်တစ်လုပ်လိုက်ရင်ရပြီကို
ပြည်တွင်းနေသူများ ငွေတောင်းခံဖို့ အခက်အခဲ ရှိမှာကို စိတ်မပူပါနဲ့ ရမယ့်သူများအတွက် ကျွန်တော့်အကောက်ကနေတောင်းပေးပါ့မယ် ကိုယ်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အကောက်မှာ ကြည့်လို့ သိတာပဲ လိမ်လို့မရပါဘူး ရစေချင်တဲ့ စေတနာသက်သက်ပါ နောက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေ ရှိပါသေးတယ် လွယ်တာတွေ ထပ်ရှယ်ပေးပါ့မယ် လောလောဆယ် တော့ ဒီမှာပဲ အကောက်ဖောက်ပြီး တင်ထားပေါ့ တင်နိုင်သလောက်ငွေရမယ် များများတင်လေ များများရလေ တိုက်ရိုက် အချိုးကျတယ် ဘောဂဗေဒ နည်းနဲ့လေ ဟိဟိ အရင်တင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်ကတော်တော်များများ သိပြီလို့ ယူဆလို့ ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ
ကဲကဲ အာချောင်တာများပြီ ဒီမှာလုပ်နော်
Create Account to Make Money
အာကာဖြိုး(နည်းပညာ) မှ မျှဝေသည်
videoငါးခုတင်ပြီးပြီ account balance မှာ 0$ပဲပြနေတယ်
ကိုနိုင် October 17, 2013 at 9:41 AM
ကိုယ်တင်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုကို လူဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်ကြည့်ထားသလဲ ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် ခင်ဗျာ လူများများဝင်ကြည့်အောင် ကြော်ငြာပေးဘို့လည်းလိုပါတယ်...